Borrasca Gloria: astaamaha, asalka iyo cawaaqibta | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 23/03/2021 11:14 | Dhacdooyinka saadaasha hawada
Maanta waxaan ka hadlaynaa mid ka mid ah duufaannadii ugu xoogga badnaa ee ku dhuftay Spain sannadka 2020. Waxay ku saabsan tahay duufaanta Gloria. Waa kii ugu horreeyay ee duufaannadii waaweynaa ee lagu daray sanadkii hore. Waxaa jira sababo badan oo ay noo xasuusinayso DANA oo dhacday Sebtember 2019. Qaddarka burburka ee ay reebeen kooxdan oo ay weheliyaan dabayl, baraf, roob iyo qulqulatooyin culus ayaa ka dhigay Gloria squall mid ka mid ah dhacdooyinka ugu daran.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa dhamaan astaamaha, asalka iyo cawaaqibta duufaanka Gloria.
1 Asalka iyo sababaha duufaanka Gloria
2 Ka dib duufaantii Gloria
3 Daraasad ku saabsan dhacdooyinka aadka u daran
Asalka iyo sababaha duufaanka Gloria
Waa duufaan jiilaal ah oo leh astaamo cimilo aad u daran oo ay ugu wacan tahay dabayl xoog leh, roob, baraf iyo hirar xoog leh oo ay sababtay. Khubarada saadaasha hawada ayaa saadaaliyay in duufaantan ay jabin doonto qaar ka mid ah diiwaanada qaar ka mid ah isbaddelayasha jawiga ugu muhiimsan ee lagu barto duufaanka. In kasta oo loo arko duufaan yar, waxay ahayd mid aad u rabshad badan.
Waa duufaan kulmisa isku dhafka dhacdooyinka aadka u daran ee ka dhasha isku dhafka hawo qabow dhammaan heerarka troposphere. Waxaan xasuusan nahay in troposphere-ka ay tahay lakabka ugu hooseeya ee jawiga oo qayaas ahaan 10 kiiloomitir ka bilowda dhulka dushiisa. Waa qaybtan ka mid ah jawiga dhulka ee ay ka dhacaan dhacdooyinka saadaasha hawadu. Isku darka hawo qabow dhammaan heerarka troposphere iyo huurka ka yimaada badda dhexe waxay ka dhigeysaa baraf barafka in uu ahaa mid aad loo soo koobay meelaha hoose. Duufaantan ayaa sidoo kale istaagtay sababo la xiriira duufaanka badda ee aagga badda Mediterranean ee jasiiradda iyo jasiiradaha Balearic.
Si fiican loo ogaado abuurista duufaanka Gloria waa inaan ka bilownaa cimilada qabow ee dhalisay. Cufkan badan ee hawo qabow oo jooggoodu kala dheer yahay ayaa la falgala anticyclone-ka jasiiradaha Ingiriiska, iyaga oo ka dhex abuura qulqul dabaylo aad u xoog badan. Labadan ayaa taga oo ay weheliso isbeddelo cadaadis oo si lama filaan ah u socda iyo dabaylo aad u qabow Waxay ka yimaadeen qaybta woqooyi ee qaaradda. Xoogga dabaysha iyo kala duwanaanshaha cadaadiska waxay sababaan asalka duufaanka iyo baraf xoog leh, xitaa meelaha hoose.
Waxa ugu caansan ayaa ah in duufaannada noocan ahi ay ku badan yihiin xilliga qaboobaha, laakiin waxa aan caadi ahayn ee xaaladdan ku sugan ayaa ah inay tahay mid aad u rabshad badan. Asal ahaan waxaa u sabab ah anticyclone aad u daran iyo dabaylo qabow oo aad u xoog badan. Labada ifafaaleba waxaa dhiirrigeliya jawi doorbidaya walxaha xagjirka ah ee heerka saadaasha hawada.
Ka dib duufaantii Gloria
Dhammaantood waxay bilaabeen Sebtember 2019. Duufaanadii ugu horreeyay ee ba'an ayaa lagu arkay DANA ee sanadka 2016. Saadaasha mustaqbalka ayaa ah in dhacdooyinkan saadaasha hawadu ay noqon doonaan kuwo aad iyo aad u sii xoog badan. Maaha inay sabab u tahay kororka soo noqnoqda, laakiin xoog. Saamaynta xun ee isbeddelka cimilada ee jawiga Dunida awgood, noocyada dhacdooyinka saadaasha hawada ee xad-dhaafka ah waxay ku dhici karaan xoog kororka.
Digniinta saadaasha hawadu waxay bilaabeen inay daadad galiyaan dhamaan warbaahinta tan iyo markii ay jireen geeri fara badan oo kajirta guud ahaan dhulka iyo boqolaal kun oo yuro oo dhaawac ah. Waxay ahayd waxyeelada ka soo gaadhay dukaamada iyo magaalooyinka, marka lagu daro jidadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo aad loola yaabay.
Marka laga soo tago waxyeelada halista ah ee aadka u daran markasta, dadku waxay isweydiinayaan haddii dhacdooyinkan cimilada ay sababi karaan dhaawac intaas ka sii badan. Ma naqaano haddii aan diyaar u nahay in aan wax ka qabanno dhibaatooyinkan ay sababi karaan dhacdooyinka soo socda ee cimilada daran. Waana taas waxay ahaayeen laba dhacdo cimilo oo xoogan muddo 6 bilood gudahood ah. Ma jiraan macluumaad badan oo ku saabsan sida inta jeer ee dhacdooyinka cimilada daran ay u kala duwanaan doonaan isbeddelka cimilada darteed. Khubarada ayaa dhaqan ahaan ka walwalsan qaabdhismeedyada iyo dhismooyinka ugu dhow xeebta cabsi ay ka qabaan heerarka badda oo sare u kaca. Waana inay tahay in arrimahan oo dhan la tixgeliyo markii la qorsheynayo dhulka.
Haddii magaalo aysan u diyaar garoobin dhacdadan oo kale, dhaawaca wuxuu noqon karaa mid aad u daran oo gebi ahaanba aan laga hortegi karin. Xogta ayaa tilmaamaysa in duufaan dhici karto sanadaha soo socda. Laakiin la yaqaan wax ka yar, laakiin aan waxyeello ka yarayn, waxaan leenahay duufaanka Gloria. In kasta oo ay ahayd duufaan yar, haddana waxyeello lama filaan ah ayey geysatay. DANA waxay soo bandhigtay dhacdooyin gaar ah oo masiibo weyn noqon kara.
Daraasad ku saabsan dhacdooyinka aadka u daran
Waa in maskaxda lagu hayaa inay jiraan daraasado la xiriira saamaynta isbeddelka cimilada ee mustaqbalka. Qof walba Dhacdooyinkaan cimilada daran waxay ku soo noqnoqdeen inta jeer ee taariikhda. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer diyaar uma tihid cawaaqibkeeda. Khubarada qaar waxay u aaneeyaan dambiga ah inaanan la diyaarin sababtoo ah xusuusta saadaasha hawada ee aan hayno awgeed. Waa inaad ogaataa in diiwaanka saadaasha hawadu uu bilaabmay sanadka 1800 wixii ka dambeeyay ma jiro taariikh cimilo aad u cufan.
Xog la'aantaani waxay sababi kartaa dhibaatooyin mustaqbalka. Waana taas, waa inaan ku adkaysano inaan si wanaagsan u baranno dhacdooyinka ba'an ee weligood jiray. Isbeddelku wuxuu yahay inay sii xoogaysanayaan oo ay sababi karaan waxyeello intaas ka sii badan. Marka tan la eego, magaalooyinka iyo magaalooyinku waa inay lahaadaan qorshooyin xakameyn dhaawac si dhammaan dhacdooyinka cimilada daran ay u yareeyaan burburka.
Isbedelka Cimilada wuxuu ka bilaabmayaa kor u kaca celceliska heerkulka meeraha oo dhan. Haddii heer kulku isbeddelaan, waxay beddeleysaa dhammaan dhaqdhaqaaqa jawiga. Maaddaama kuleyl badan uu ku jiro jawiga, gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ah ayaa sii kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa. Dhamaan doorsoomayaashaan, ka dhig jawiga cimilada gebi ahaanba ka duwan isbeddel tartiib tartiib ah, laakiin dhakhso iyo dhakhso badan. Haddii aynaan joojin saamaynta isbeddelka cimilada, xaaladdu si weyn ayey isu beddeli doontaa. Macno malahan inta ay le’eg tahay tiknoolajiyadda uu bini’aadamku leeyahay, isbeddelada cimilada waxay ku dhacaan si ka dhakhso badan oo aan la saadaalin karin.
Sidaa darteed, waa lagama maarmaan inaad iska ilaaliso naftaada duufaannada soo socda ee laga yaabo inay ina soo food saarto. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto duufaanka Gloria iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Squall Gloria
Solstices iyo equinoxes
Baaxadda buuraha Arctic